Myanmar Internet Guide - Consumer Reviews and Ratings
Myanmar Internet Guide
Myanmar Internet Guideကုန်မှတ်ချက်
There are 5290 listings and 406 categories in our website
You are here: Myanmar Brands Reviews / Expats (ရေခြားမြေခြား) / Japanese in Myanmar (日本人) / Myanmar Japan SEDA
Cultural association in Yangon, Myanmar
Tel : ( 95-1 ) 246636, 253177, 384309
The York Center, 22 Yaw Min Gyi St, Yangon, Myanmar - မြန်မာ
Web site / အင်တာနက် လိပ်စာ
Views / ဒီစာမျက်နှာကို လာကြည့်သွားသူ စုစုပေါင်း
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း
Rating / ကြယ်ပွင့် သတ်မှတ်ချက်
ဒီဝဗ်ဆိုက်က အခုလောလောဆယ် ကြယ် လုံး ရထားပါတယ်။ ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို ကြိုက်ရင် အောက်က ဒီလို အဝါရောင် ကြယ်လေးတွေကို နှိပ်ပြီး မဲပေး လိုက်ပါ။ (အကြိုက်ဆုံးဆို ကြယ် ၅ လုံး၊ မကြိုက်ဘူး ဆိုရင် ကြယ် ၁ လုံးပေါ့။)
thumb_up ကြုံကြိုက်တုန်း အားပေးခဲ့ပါဦးရှင်။
အပေါ်က ဝဗ်ဆိုက်ကို ကြိုက်တဲ့သူ အရေအတွက်ကတော့ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။
comment ထင်မြင်ချက်လေး ရေးထားပေးခဲ့ပါနော်။
Do you know them? Tell others what you think.. Your reviews and comments are valuable to others..
ဒီထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ လုပ်ငန်း အကြောင်း သိပါသလား။ သင့်ထင်မြင်ချက်ဟာ အခြားလူတွေအတွက် အရမ်း တန်ဘိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အားပေးတာဖြစ်ဖြစ်၊ အပြုသဘော ပြင်ဆင်သင့်တာ ရှိရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ရေးထားပေးခဲ့ရင် ကျေးဇူးတင်မှာ အမှန်ပါ။ သင့်အတွေ့အကြုံကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မျှဝေခဲ့တာဟာ ဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံးတာ တစ်ခုဘဲပေါ့။
contact_mail ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကို ဆက်သွယ်ချင်ရင်
အောက်က ကွက်လပ်ထဲမှာ စာရေးပြီး Send နှိပ်လိုက်ပါ။
All Categories Arts (အနုပညာ) Computer (ကွန်ပျူတာ) Directories (လမ်းညွှန်) Education (ပညာရေး) Entertainment (ဖျော်ဖြေရေး) Expats (ရေခြားမြေခြား) Government, Politics (နိုင်ငံရေး) Health (ကျန်းမာရေး) Hotels & Office (ဟိုတယ်) Manufacturers (ကုန်ထုတ်) Media (စာနယ်ဇင်း) NGO, INGO (အသင်းအဖွဲ့) People (လူမှုရေး) Product Reviews (ကုန်ပစ္စည်း မှတ်ချက်) Religious (ဘာသာရေး) Restaurant (စားသောက်ဆိုင်) Services (ဝန်ဆောင်မှု) Shopping (ဈေးဝယ်) Startup Travel (ခရီးသွား) Uncategorized (အမျိုးအစားမသိ)
Do you use MyTel ?
MPT (Myanmar Post & Telecoms), Ooredoo, Telenor, or MyTel? Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? Please let me invite you toabrief survey.
​အနုပညာ | ကွန်ပျူတာ | လမ်းညွှန် | ပညာရေး | ဖျော်ဖြေရေး | ရေမြေခြားသူ | နိုင်ငံရေး | ကျန်းမာရေး | ဟိုတယ် | ကုန်ထုတ် | စာနယ်ဇင်း | အသင်းအဖွဲ့ | လူမှုရေး | ကုန်ပစ္စည်း မှတ်ချက် | ဘာသာရေး | စားသောက်ဆိုင် | ဝန်ဆောင်မှု | ဈေးဝယ် | ခရီးသွား | အမျိုးအစားမသိ
တိုင်းရင်းသား အဘိဓာန် / Myanmar Dictionaries
Copyright © 2018. - Consumer Reviews and Ratings.